Somali / Wargalin muhiimka ah oo ka Socota Iskoolada Cherry Creek
Gacaliyeyaal Bulshada Iskoolada Cherry Creek,
Waxaan sii wadnaa kormeerka xaaladaha COVID ee Degmada Arapahoe waxaanan si taxadar leh uga rajo qabnaa arintan, oo ku saleysan xogta hada jirta, inaan horay ugu sii socon karno qorshaheena ah inaan si amaan ah dib ugu furno iskuoolada 17ka August, iyo hirgalinta labadaba nidaam ee kala ah (kaamil ah K-5, Isku-darka 6 -12) iyo barashada fasalka dhexdiisa ah iyo khadka tooska ah ee internedka. Waad ka arki kartaan macluumaadka cusub halkan CCSD COVID tixraaca websaydka si aad u arkagto cabirada xogta gaarka ah ee loo isticmaali doono go'aanada ku saabsan dib-u-furista iskoolada. Filo isgaarsiin casri ah Khamiista, bisha August 6deeda.
Anagoo sii wadna qorsheynta dib-u-furida si nabadgelyo leh ee dugsiyada, waxaan sidoo kale ka shaqeyneynaa sidii aan wax uga qaban lahayn hoos u dhac miisaaniyadeed oo dhan $ 60 milyan , sababtuna ay tahay miisaniyadii laga dhimay dugsiyadeena oo ka timid xaga maalgelinta waxbarashada gobolka iyo sidoo kale kharashyada socon doona mudada fog ee la xiriira masiibada xanuunkan.
Maanta, waxaan idiin hayaa war muhiim ah oo ku saabsan qorshaheena aan kaga hor tagno caqabadaha miisaaniyadeena.
Habeenimadii Isniinta, Golaha Waxbarashada ayaa si wadajir ah ugu codeeyay in loogu sameeyo miisaaniyad iyo doorashada debaajiga-Bond. Gaar ahaan, Gudigu wuxuu ku baaqay doorashada miisaaniyadu in kor loo qaado $ 35 milyan oo loogu talagalay kharashaadka hawlgalka si loo joojiyo qaar ka mid ah saamaynta ugu xun ee miisaaniyada, iyo $ 150 milyan oo ah cod u qaadida doorashada debaajiga ah oo ay kujirto kharashaadka dib-u-dhaca, casriyeynta amniga, cusboonaysiinta diirada lagu saaray barnaamijka hal abuurka Dugsiyada sare, xarun lagu daweeyo caafimaadka maskaxda, iyo suuragalnimada in la sameeyo dugsi cusub oo ku yaal qaybta bari ee degmada si loo yareyo ciriiriga dugsiyada.
Tala soo jeedinta waxaay ka timid Gudiga Miisaaniyada iyo Golaha guurtida, oo ay ku jiraan laba gudiyo tabaruc ah oo ka kooban waalidiinta, macalimiinta, ardayda, xubnaha bulshada, maamulayaasha iyo shaqaalaha degmada. Kooxahan yaa kulankoodu qaatay bilo waxayna ka wada hadlayeen sdii ay suurtagal u noqon lahayd dhimista kharashka iyo abuurista ilaha cusub ee dakhliga. Saamaynta isku-dhafka ah ee talooyinka xaga canshuurta dadka guryaha leh waxay dhan tahay ilaa $ 1.65 bishii $ 100,000 oo ah qiyaastii qiimaha guriga.
Fiiri macluumaad dheeri ah oo ku saabsan miisaaniyada iyo doorasho in loo qaado- bondka iyo sidoo kale wargalinta cusub ee ku saabsan caqabadaha miisaaniyadeena. In kasta oo xaalada miisaaniyadeena ay liidato, waxaan ku kalsoonahay inaan ka wada shaqeyn karno bulsho ahaan sidii aan u heli lahayn dariiqii horay loogu mari lahaa dhamaana ardaydeenana loo siin lahaa waxbarasho wanaagsan iyo mustaqbal fiican.
Fadlan halkan ka fiiri Qorshaha Mustaqbalka 2020-2021 websaydka si aad u hesho macluumaadkii ugu dambeeyay oo ku saabsan dib-u-bilaabida dugsiyada oo isgaarsiin cusub ay ka imaan doonto Khamiistan.
Si aad ugu tarjumato websaydka Qorsheynta Mustaqbalka, isticmaal oo ka xulo luqadaha liiska tarjumaada ee barta madow. Fadlan la xiriir -Omar Nur cinwaanka emaylka-onur2@cherrycreekschools.org si aad u hesho macluumaad ku qoran luqadaada.
Waxaan rajeynayaa inaad ku nasataan xagaaga-summerka .